आज जनै पूर्णिमाः यस्तो छ जनै लगाउनुको शास्त्रीय मान्यता AahaKhabar
आज जनै पूर्णिमाः यस्तो छ जनै लगाउनुको शास्त्रीय मान्यता
जनैपूर्णिमा तागाधारी र ओमकार परिवारको विशेष पर्व हो। सबैर उठेर विधिपूर्वक श्रावणी स्नान गर्नु, सप्तऋषिलाई तर्पण गर्नु, विधिपूर्वक तयार पारिएको जनै र रक्षाबन्धन धारण गर्नु यस पर्वका मुख्य विशेषता हुन्। पूर्वजहरूले यो पद्धतिको विकास त्यतिकै गरेका हैनन्, यसमा केही न केही वैज्ञानिक पक्ष लुकेकै छ। हरेक समुदायका आफ्ना मौलिकता हुन्छन्।
जनैपूर्णिमा पनि तागाधारीको मौलिक पर्व हो। तर अचेल यो सम्पूर्ण नेपालीको पर्व बनेको छ। सरकारले जनैपूर्णिमाका अवसरमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौती गरेको छ। यहाँ जनै निर्माणदेखि धारणसम्मका केही शास्त्रीय विधिको चर्चा गरिएको छ।
जनैलाई यज्ञोपवीत, ब्रह्मसूत्र, सावित्रीसूत्र भन्ने गरिन्छ। विधिवत् कातिएको काँचो धागो दाहिने हातको चारवटा अंगुलीको मूल भागमा छयानब्बे पटक बेरी उक्त सूत्रलाई तेब्बर बनाएर जनै बनाइन्छ। जनै बनाउँदा धागोलाई ९६ पटक फन्को मार्नुको कारण यस्तो छ :
प्रथम पक्ष : तिथि– १५, बार– ७, नक्षत्र –२७, तत्त्व – २५, वेद– ४, गुण– ३, काल– १२ गरी ९६। द्वितीय पक्ष : २४ अक्षरले युक्त गायत्री छन्दको संख्यालाई ऋग्यजुरसामाथर्व ४ वेदले गुना गर्दा आउने ९६ संख्याको फन्कालाई ब्रह्मतन्तु भनिन्छ।
यसरी तयार पारिएको तीन सूते धागोलाई कतुवाले बाटी पुनः तेब्बर पारी बाटेर नौ डोरा बनाइन्छ। उक्त सूत्रलाई ओम्कार, अग्नि, नाग, सोम, पितृ, प्रजापति, वायु, सूर्य र सर्व आदि गरिएका नौवटा देवता स्थापित गरिन्छ। हात र घुँडाको माध्यमबाट पाँचवटा शिखाले युक्त जनैलाई तीन डोरामा परिणत गर्दै ब्रह्मा, विष्णु र ईश्वरलाई स्थापित गरिन्छ। यसरी विभिन्न रीत पुर्‍याई बनाइएको जनै नै शुद्ध हुन पुग्छ।
३, ६ वा ९ डोराले युक्त जनै र एउटा काँचो धागो निकाली तीन आँख्ला पारी तीन डोराले युक्त रक्षासूत्रलाई निम्नानुसार परिभाषित गरिएको छ। त्रिवेद (ऋक, यजुः र साम। त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर), त्रिगुण (सत्व, रज र तम), त्रिशक्ति (महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदिको प्रतीक)। तीनवटा ऋण (ब्रह्मऋण, पितृऋण र देवऋण।) तीन अवस्था (जाग्रत, सुस्वप्न, सुषुप्त।)
यसरी विधिविधानसहित तयार पारिएको जनै र रक्षाबन्धन डोरो श्रावणी स्नानपूर्वक ऋषिपत्नी अरुन्धतीसहित कश्यप आदि गरिएका सप्त ऋषिहरूको पूजाका साथ अभिमन्त्रण गरी गुरुपुरोहितबाट समन्त्र ग्रहण गरिन्छ।
सरी नारीका लागि ऋषिपञ्चमी महत्त्वपूर्ण छ। पुरुषका लागि जनैपूर्णिमा त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ। शरीर, बोली, मन, इन्द्रिय, बुद्धि, आत्मा र प्रकृतिजन्य स्वभावका कारण गरिएका नराम्रा कार्यको वार्षिक प्रायश्चित्तको पर्व हो पूर्णिमा। आफ्ना पूर्वजका रुपमा ऋषिपत्नीसहित सप्तर्षिहरूको पूजा गर्नु नै क्षमापूजा हो।
जनै लगाउनुअघि ख्याल गर्नुहोस् :
१. बजारमा उपलब्ध हुने जनै कस्तो छ?
२. गुरुपुरोहितले उपलब्ध गराउने शुद्ध छ कि छैन ?
३. लगाइदिने पात्रको जानकारी लिनु आवश्यक।
४. मठमन्दिरमा बास बसी १–२ बजेबाट डोरो (जनै लगाइदिनेले प्रक्रिया पुर्‍याएका छन् वा छैनन् ? )
५, जनै, डोरो र राखी शास्त्र सम्मत हुन् कि होइनन् ?
यी विषयका आधारमा तयार पारिएको रक्षासूत्र रक्षाबन्धनले जसरी दानवीर र बलशाली बलि राजा बाँधिई यशस्वी भए तिमी पनि त्यसरी नै सुरक्षित र यशस्वी हुनु। यहाँ प्रयुक्त डोरो, सूत्र र धागोको काम देशवासीलाई जोड्नु, पर्वका माध्यमबाट एकाकार गराउनु, बितेको वर्षको प्रायश्चित्तका साथ आगामी वर्षका लागि शक्ति सञ्चय गर्नु हो।
प्रायश्चितका लागि अरुन्धतीसहित आफ्ना वंश प्रवर्तक ऋषिहरूको पूजाका साथ रक्षासूत्रसहित यज्ञोपवीत फेर्ने फेराउने गरिन्छ। सात्विक पर्व भएकाले खानपिन पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्ने देखिन्छ। लौकिक रूपमा नौवटा गेडागुडीबाट तयार पारिएको क्वाँटी खाने प्रचलन छ।